Fifidianana ben'ny tanana :: Nametraka fepetra maro amin'ny Ceni ireo vondrona mpanara-maso • AoRaha
Fifidianana ben’ny tanana Nametraka fepetra maro amin’ny Ceni ireo vondrona mpanara-maso
Toromarika am-po­lony. Fanamarihana sy soson-kevitra maro no natolotr’ireo mpanara-mason’ilay Sampana hana­raha-maso ny fifidianana ivon’ny demokrasia ifarim­bonana (Safidy) tamin’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Miompana amin’ireo lesoka mila harenina mano­didina ny fikirakirana ny raha­raham-pifidianana mialoha ny fifidianana ben’ny tanàna ny antson’ny Safidy, izay miantefa amin’ny Ceni.
Naroso ny hevitra tokony hanokafana mandavan-taona ny lisi-pifidianana ; ny fampandraisana anjara bebe kokoa an’ireo tompon’andrai­kitra eny amin’ny fokontany amin’ny fikarakarana ny fifi­dianana. « Mbola olana mitoetra hatrany ny fahadisoana ao anatin’ny lisitra miteraka fahaverezan-jo eo amin’ireo olom-pirenena. Tokony hatao ny fifidianana filoham-pokontany mba tena hahamarin-toerana sy ny mba haha to teny azy ireo amin’ny andraikitra momba ny fifidianana », hoy ny fanambaràna nataon’ny Safidy, tetsy amin’ny foiben’ izy ireo, tetsy Ambatonakanga omaly, sady narahin’ny tatitra mikasika ny fomba fahitan’izy ireo ny fifidianana depiote tamin’ny 27 mey 2019 lasa teo.
Mahita ihany koa ireto mparana-maso ny fifidianana ireto fa tsy ampy mihitsy ny fanentanana an’ireo olom-pirenena hanefa ny adidiny tamin’iny fifidianana iny.
« Solombavambahaka folo amby zato tamin’ireo iraika amby dimampolo amby zato handrafitra ny Antenimierampirenena no lany tamin’ny tahan’ny mpifidy latsaky ny 20% », hoy i Erason, tompon’ andraikitra misahana ny lalàna ao amin’ny Safidy.
Mahita kosa anefa ny Safidy fa nizotra tamim-pila­minana iny fifidianana farany teo iny. Voaresaka kely ihany ny fangaraharahan’
ny fisahanana ny raharaham-pifidianana ataon’ny Ceni, satria tsy mbola mahafa-po azy ireo. Takian’ny Safidy, ohatra, ny hisiana rafitra manokana hanara-maso ny fitantanam-bolan’ny Ceni. “Tokony tsy ho be loatra koa ireo mpiasam-panjakana miasa ao amin’ny Ceni, satria mety mandray baiko amin’ ireo lehibeny izy ireny”, hoy indray i Stella Razanamahefa, isan’ireo mpandrindra ny asa fanaraha-maso ny fifidianana ao amin’ny Safidy.
Tsy afa-bela ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-pano­re­nana noho tsy fisian’ny mangaraharaha tamin’ny fomba nentin’ny HCC
namaliana an’ireo fitoriana an-jatony. Toromarika avokoa ireo.
Tsy ny Safidy ihany no nitondra fanamarihana toy izao fa betsaka ihany koa ireo antoko politika mitaky ny fisian’ny fanatsarana amin’ ireo fifidianana mbola hatao eto amintsika.
Fanampiana isan-tokatrano Hiverina ny fizaràna Vatsy Tsinjo eto Antananarivo
Baolina kitra – Afrikana Holalaovina tsy misy mpijery ireo fifaninanan’ny CAF
Fanavaozana ny rafi-panabeazana :: Hotohizana hatrany indray ny fanadinana CEPE
Ady amin’ny kolikoly :: Miandry sonia ny fanenjehana momba an’ireo harena tsy ara-dalàna